Vagari Veguta reMasvingo Votsamwiswa neMabhiri eMvura Avari Kutumirwa neKanzuru
Kubvumbi 12, 2018
Kanzuru yeMasvingo inoti pombi dzinofambisa mvura dziri kutsemuka nekuda kwekuchembera
Vagari vemudhorobha reMasvingo vatosvorana nekanzuru yavo zvichitevera kuuya kwakaita mabhiri emvura ane mari yakakwira kunyange vachiti vange vasingawani mvura yakakwana mazuva ose.
Vagari vakawanda vanoti vari kurwadziwa zvikuru nemari yavari kunzi nekanzuru vabvise iyi. Mabhiri aya ari kutangira pamadhora makumi mana kusvika pazana remadhora, asi pamwedzi woga woga vagari vachiti vanga vasingashandisi mvura inopfuura madhora makumi maviri kana mvura ichiwanikwa nguva dzose.
Asi vagari ava vanoti vari kuwana mvura shoma nepamusana pekuti magetsi anogara achidzimwa kuchiteshi chinopomba mvura cheku Bushmead kudhamu reMutirikwi.
Amai Lilian Gwanongodza vanoti havasi kuzobhadhara mari iyi nekuti vanenge vachibhirwa sezvo mari iri kunetsa munyika.
"Mabhiri auya asina kumbomira mushe mamwe $30.00, $40.00 pamwe $100.00 chaiyo, that means vakomana ava vari kuita ma estimates vachiti pane gedhi kana durawall. Asi vanhu havasi kutombofara nema estimate ari kuitwa, mari iyi hatitombozivi kuti toiwana kupi?"
Muzvare Jean Mukandi vanoti kanzuru haisi kuita basa rayo nemazvo sezvo zvisina musoro kubhadharisa munhu mvura, asi dzakavharwa.
"Vanhu vekanzuru vanoita zvakashata. Vanenge vari kuswera vari pasi pemuti vachiita ma estimates vachinyora zvibhuku zvavo, sepamba pedu mvura yakavharwa asi mapepa ari kungouya, saka mvura yavanochaja ndeyeyi ivo vakavhara mvura yacho."
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muMasvingo United Resident and Rate Payers Alliance, Muzvare Esther Chimanikire, vanoti kanzuru haifaniri kuomesera vagari nekukwidza mabhiri iwo hupeyu hurikunetsa munyika nenyaya yekushaikwa kwemari.
"Isu toti ma estimates haana kunaka. Dai vanotora mamita vachipinda mudzimba vachinyatsotora mari yatinenge takashandisa, zvinorwadza kuti wakashandisa $10.00, asi woona pauya $200.00. City Council tinoiita engage, tinzwe kuti chii chiri kunetsa."
Meya weguta, VaHubert Fidze, vanoti vachatarisa nezvenyaya yevashandi vavo vanonzi havasi kuita basa nemazvo.
"Kana vanhu vakaramba vachireiza zvinotibatsira tione pane problem , asi tinonzwa kuti vanoveranga havasi kupinda mudzimba asi tinokurudzira vagari kuti vaverengewo mamita avo vazotibatsira kuona kuti vanoverenga havasi here kuitia basa," VaFidze vadaro.
Vagari vanoti chiri kunyanya kuvarwadza kubhadhara mari yakawanda apo vachipedza nguva yakakura vachishandisa mvura yemunzizi, sezvo mvura iri kuvharwa kwenguva yakareba mudhorobha.
NeChitatu muguta manga musina mvura zvichitevera kuputika neusiku hweChipiri kwepombi dzinotakura mvura.
VaFidze vakumbira ruregerero kuvagari vachiti pombi dzemvura dzkaputika nenyaya yekuchembera.